ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -10 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -09
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -11 →
ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းကို မြင်တွေ့ရသည်ဆိုရာ၌ ဖြစ်ပြီးပျက်သွားသည်က ဓမ္မတရားကလေးများ၊ ထိုအပျက် ဓမ္မတရားကလေးများကို မြင်တွေ့လိုက်ရသည်က ဉာဏ်ပညာ၊ ဤသို့ဖြင့် ဖြစ်ပျက်သည်က တခြား အပျက်မြင်သော ဉာဏ်ကတခြားဖြစ်သည်။
ထိုအခါမှ ဆင်ခြင်လာကြရသည်။ ဝေဒနာ နုပဿနာ ရှုစဉ်က မမျှော်လင့်ဘဲ ဘွားကနဲ တွေ့မြင်ခဲ့ရသော ကိလေသာ ရေသောက်မြစ်မှာ ဒုက္ခ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်လျက် ထိုရေသောက်မြစ်ကို မြင်တွေ့လိုက်ရသည်က ဉာဏ်မျက်စိဟု သဘောပေါက်လာသည်။
ကိလေသာ ရေသောက်မြစ်ကို မြင်တွေ့ရစဉ်က အံ့သြမိသည်။ ထူးထူးခြားခြား ၀မ်းမြောက်မိသည်။ ထိုရေသောက်မြစ် အငုတ်ကြီးကို မြင်တွေ့နိုင်ရန်ပင် ဝေဒနာ နုပဿနာ အကြိမ်များစွာ ထိုင်ခဲ့ဘူးသည်။
ယခုအခါ ထိုထက် အံ့သြဘွယ်ရာကို တွေ့မြင်လာရပြန်သည်။ ထိုအရာမှာ အခြားမဟုတ် လူတို့၏ အတွင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်ရာ ဟဒယ ရုပ်ဝတ္ထုကလေးပင်ဖြစ်သည်။ ဟဒယ ရုပ်ဝတ္ထုကို ၀ိပဿနာဉာဏ်ဖြင့် တွေ့မြင်ရသည်။ ဖြစ်ပျက်မြင်အောင်ကြည့်ဆိုသည်မှာ ထို ဟဒယ ရုပ်ဝတ္ထုကလေးအပေါ်၌ ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်ကလေး၏ အပျက်ကို မြင်ရန် ကြိုးစားရခြင်း သဘောဖြစ်သည်။
ကျင့်စဉ်မှာ တဖြည်းဖြည်း အနုစ်ိတ်လာသည်။ ပညာသား ပါလာသည်။ စိတ်၏အပျက် ရုပ်၏အပျက်ကို ဉာဏ်ဖြင့်မြင်ရန် ကြိုးစားရှုသတ်ရသည်။ အောင်မြင်လျှင် စိတ်ချုပ်ပျက်သွားပြီးနောက် ဓမ္မသဘာဝ တရားကလေးများ နူးနူးညံ့ညံ့ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ပေါ်လာသည် ဤသည်ကိုပင် ဓမ္မာနုပဿနာဟု ခေါ်သည်။
ဓမ္မသဘာဝသည် ညှင်းညှင်းငွေ့ငွေ့ အတွေ့ညင်သာသည်။ ကြည်၍ဟာသည်။ ပေါ့၍လွတ်သည်။ ငြိမ်၍ ငြိ်မ်းချမ်းအေးမြသည်။ နေလို့ကောင်းသည်။ အတုံးအတစ် အစိုင်အခဲများ မတွေ့ရတော့ချေ။ အသိရှင် သတိဝင်နိုင်မှ တော်ကာကျသည်။ တော်တော်ကလေး သိမ်မွေ့နူးညံ့သွားပါသည်။
ထို့ကြောင့် တရားထိုင်လျှင် သိမ်မွေ့ရမည်။ ကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်းလျှင် တရားကျင့်နည်း မှားနေ၍ဖြစ်မည်။ တရားရှင်တို့သည် သိမ်မွေ့နူးညံ့ကြရိုး အစဉ်အလာ ဓမ္မတာရှိသည်။
စာဖတ်သူ ယောဂီသည် မိမိကိုယ်ကို . . .
စောကြောစီစစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်တိုင်စောစောသိလေ ကောင်းလေဖြစ်သည်။ နုပဿနာ အလုံးစုံကို ခြုံ၍ အလှည့်ကျ ရှုသတ်ကြသော ယောဂီများလည်းရှိသည်။
ထိုသို့ ရှုပုံ ဉာဏ်မျိုးစုံကို ဆရာမြတ်ထံမှ အမွေရရှိလိုက်ရာ တရားဉာဏ်ဖြင့် လွှမ်းမိုး အုပ်ချုပ်နိုင်ပါမှ ယထာဘူတကျနိုင်ကြောင်း သိနားလည်လာရသည်။ ထို့ကြောင့်အကြားအမြင်ထက် တရားဉာဏ်အမြင်က ပိုမိုလေးနက်ကြောင်း ခံယူလာမိသည်။ ဖြစ်ပျက်ကို မြင်အောင်ကြည့်ခြင်းသည် အထူးခြားဆုံးသော ကျင့်စဉ်ကောင်း ကျင့်စဉ်မြတ်ပေတည်း။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, စိတ္တာနုပဿနာ, ဓမ္မာနုပဿနာ, ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, ဟဒယ, ဝေဒနာနုပဿနာ
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, စိတ္တာနုပဿနာ, ဓမ္မာနုပဿနာ, ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, ဟဒယ, ဝေဒနာနုပဿနာ. Bookmark the permalink.